Sideen ku soo gelaa Lifeworks? – LifeWorks
Sideen ku soo gelaa Lifeworks?
Waxaa jira laba siyaabood oo kala duwan si aad ugu biirto LifeWorks.
1. Martiqaad iimayl:
Haddii aad heshay martiqaad iimayl ah, raac linkiga cinwaanka iimaylka si aad u sameysato akoonkaaga LifeWorks.
2. Lambarka samaysashada akoonka:
Haddii shirkaddaada ay la wadaagtay koodh samaysashada kootada, booqo login.lifeworks.com , xulo ' Samayso akoon ' ee dhinaca kore ee midigta sare ee bogga oo geli koodhka. Haddii kale, waxaad kala soo bixi kartaa abka bilaashka ah ee LifeWorks moobiilka ee ka yimid Apple App Store ama Google Play Store dusha Taleefoonkaaga casriga ah oo geli lambarka martiqaadka qaybta ' Isdiiwaan geli ' qaybta.
Haddii aadan heliniimayl amalambarka martiqaadka ah, fadlan la xidhiidh HR / waaxda dheefaha ama maamulaha LifeWorks si aad u ogaato sida aad u samaysato akoonka.
Haddii aad mar hore iska diiwaangelisay, waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka bilaashka ah ee loo yaqaan LifeWorks mobile app ah Apple App Store ama Google Play Store taleefankaaga casriga ah kadibna riix ' Gal Goobta '. Haddii kale, booqo LifeWorks mid ka mid ah barowsaradayada la taageerp (Firefox, Safari, Google Chrome ama Internet Explorer 11) oo gal cinwaanka .